Zon’Olombelona, Tranombokin’ny Tsy Fanaovana Herisetra & Krismasy · Global Voices teny Malagasy
Zon'Olombelona, Tranombokin'ny Tsy Fanaovana Herisetra & Krismasy
Voadika ny 26 Oktobra 2017 1:59 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Janoary 2006)
Cheraghyekhamoush (vonoy ny jiro) miresaka momba ny fanambaran'i Ahmadinejad vao haingana momba ny zon'olombelona tamin'ny Eoropeana . Araka ny filazan'ny filoha Iraniana, izay mitondra governemanta iharan'ny teritery noho ny fanitsakitsahana zon'olombelona, afaka mandefa delegasionina any amin'ny firenena Eoropeana i Iran mba hitatitra momba ny zon'olombelona anisan'izany ny mikasika ireo gadra politika, ny zon'ny vehivavy sy ny sisa any amin'ireo firenena Eoropeanina. Eoropa kosa, dia afaka mandefa ny solontenany manokana ho any Iran. Amin'ny farany, afaka mitsara ny tatitry ny roa tonta izao tontolo izao!!!! Nilaza ilay bilaogera hoe maninona isika no tsy manomboka mijery any Iran izay misy gazety 100 voaràra nandritra ny roa taona na hoe nahoana no tsy misy olona te-hitatitra momba an'i Ganji sy ireo gadra politika hafa. Manontany ity bilaogera ity raha hanana zo hamoaka ny tatitry ny Eoropeana momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao Iran ny gazety Iraniana sa ny fomba fijerin'ireo solontena Iraniana ihany no havoakan'ireo gazety. Ny farany fa tsy ny kely indrindra, hoy izy, dia araka ny filazan'ny governemanta Iraniana, afaka mitsidika ireo gadra politikantsika tsy misy olana ny Eoropeana saingy adinon'izy ireo fa tsy navela nitsidika ny vadiny nandritra ny volana maromaro ny vadin'i Ganji !!!!!
Nanangana tranombokin'ny tsy fanaovana herisetra ny Fanous, bilaogy iombonana. Ao amin'ny tranombokin'izy ireo, afaka mahita boky, toy ny ”Miala amin'ny Didy Jadona mankany amin'ny Demaokarsia’ an'i Gene Sharp’, amin'ny fiteny Persiana sy Anglisy isika, mba ho trohana sy hampifandraisina amin'ireo ivon-toerana tahaka ny an'i Albert Einstein. Karazana bilaogy mampiroborobo ny fandriampahalemana izany.
Toa misy ireo bilaogera hafa mitady fandriampahalemana, tahaka an'i Abtahi, filoha lefitra taloha, izay miresaka momba ny Krismasy:
“Besides the fact that Jesus Christ is a great prophet respected by all of us, his main slogan is peace and friendship which humanity more than ever needs it at present. The nature of religions is basically inviting people to kindness and friendship. This is contrary to the situation existing now when violence has become the voice of religions”.
“Ankoatra ny hoe mpaminany lehibe nohajaintsika rehetra i Jesoa Kristy, ny fandriampahalemana sy ny finamanana no teny filamatra lehibe ifotorany izay mbola ilain'ny olombelona ankehitriny mihoatra noho ny hatramin'izay. Ny karazana fivavahana amin'ny ankapobeny dia manasa ny olona mba ho tsara fanahy sy ho mpinamana. Mifanohitra amin'ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao anefa izany izay nanjary lasa feon'ny fivavahana ny herisetra “.
18 ora izayTiorkia